တစ်လနှင့်အထက် နေထိုင်သူ အိမ်ငှားများ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ အသိပေးအကြောင်းကြား? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၂- ရပ်ကွက်များအတွင်း တစ်လနှင့် အထက် နေထိုင်သူအိမ်ငှားများ အနေဖြင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေး မှူးရုံးများသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသင့်သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့လုံခြုံရေး နှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူး ကြီးအောင်စိုးမိုးက ပြောသည်။ အောက်တိုဘာ ၁၂ရက် ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အစည်း အဝေးတွင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)လွှတ် တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှဌေး၏ “အိမ်ငှားရမ်းနေထိုင်သူများသည် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများ ၌ ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားရန် လိုအပ် ခြင်းရှိ၊ မရှိ။ ရပ်ကွက်အတွင်း နေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံစာ ရယူလိုပါက မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက် ရမည်” ဟူသည့် မေးခွန်းကို ၀န် ကြီးက အထက်ပါအတိုင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“အိမ်ငှားနေထိုင်သူတွေ ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာ ဧည့်စာရင်း တိုင်ကြားဖို့ လိုအပ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ရပ်ကွက်(သို့)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ(၁၄)အရ ရပ်ကွက် အတွင်း တစ်လနှင့်အထက် ကျော် လွန်နေထိုင်မယ်ဆိုရင် သတ် မှတ်နည်းလမ်းနဲ့အညီ သက် ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူထံ အသိပေး အကြောင်းကြားဖို့ဖြစ်တယ်။ ရပ် ကွက်တွေအတွင်းမှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကိစ္စ၊ လူစိမ်းတွေရောက် ရှိနေထိုင်မှုတွေကို သိရှိစေဖို့၊ လုံ ခြုံရေးကျိုးပေါက်မှုမရှိစေဖို့ အိမ် ထောင်စုအမည်စာရင်းတွေပြည့် စုံတိကျစွာသိရှိနိုင်ရန်အတွက်ကို အိမ်ငှားနေ ထိုင်သူများဟာ ရပ် ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာ အသိ ပေးအကြောင်းကြားရန်အတွက် ကို အိမ်ရှင်၊ ဒါမှမဟုတ် မြေရှင် ကိုယ်တိုင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးသို့ သတ်မှတ်နည်းလမ်းနဲ့အညီ အသိပေး အကြောင်းကြားသင့် ကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်”
ဟု ၀န်ကြီးက ပြောသည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်ရပ်ကွက် (သို့)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေအခန်း(၉)ရပ်ကွက်(သို့) ကျေးရွာအုပ်စုတွင်း နေထိုင်သူ၏တာဝန်ဝတ္တရားများပုဒ်မ(၁၇)တွင် ရပ်ကွက်(သို့)ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း နေထိုင်သူသည်အခြား ရပ်ကွက် (သို့)ကျေးရွာအုပ်စု တစ်ခုခုတွင် နေထိုင်ပြီး မိမိအိမ် ထောင်စုစာရင်းဝင်မဟုတ်သူက ညအိပ်ညနေဧည့်သည်အဖြစ် လာရောက်တည်းခိုခြင်း၊ နံပါတ် (၂)မှာမိမိထံလာရောက်တည်းခို သော ဧည့်သည်ပြန်လည်ထွက် ခွာခြင်းတို့ကို တိုင်ကြားရမည် ဟုပါရှိသော်လည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ် ရပ်ကွက်(သို့) ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေပုဒ်မ(၁၄)အရအထက်ဖော်ပြပါပုဒ်မ(၁၇)ကိုရပ်ကွက်(သို့)ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း တစ်လနှင့်အထက်ကျော် လွန်၍ လာရောက်တည်းခိုနေထိုင် သူများရှိပါက မှတ်တမ်းထားရှိ နိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်နည်း လမ်းများနဲ့အညီ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူထံအသိပေးအကြောင်း ကြားရမည်ဟု အစားထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ ကြောင်း ၎င်း ကပြောသည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှဌေးက “ယခု ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ် တော်မှာ ဧည့်စာရင်းတိုင်ခြင်း ဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ တယ်။ အဆိုပါဥပဒေပျက်ပြယ် သွားသော်လည်း ရပ်ကွက်အုပ် ချုပ်ရေးမှူးရုံးများမှာ အထက်မှ ညွှန်ကြားချက်များပေးပို့လာခြင်း မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် တိုင်ချင်လည်းရတယ်။ မတိုင် ချင်လည်းရတယ်ဆိုတဲ့ စနစ် တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ နှစ် ချုပ်၊ လချုပ်နဲ့ အိမ်ငှားရမ်း နေထိုင်တဲ့သူတွေဟာ လုပ်ငန်း ဆောင်တာအချို့အတွက် ရပ် ကွက်အတွင်း နေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံစာတောင်းတဲ့အခါမှာ ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားထားခြင်း မရှိတဲ့အခါ ထောက်ခံစာမထုတ် ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် အငြင်း ပွားမှုတွေလည်း တွေ့မြင်နေ ရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး များမှာ ရပ်ကွက်အတွင်းမည် သည့် နေအိမ်တွင်မည်သူတွေ ၀င်ရောက်နေထိုင်ကြောင်းမသိရှိ သည့်အတွက် အခက်အခဲများ ရှိနေကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲမဲ စာရင်း၊ အမည်စာရင်းတင်သွင်း သည့်အခါ သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်ပေါင်း အရေအတွက်ကို လည်း မည်သည့်စာရင်းနှင့်ရေ တွက်ရမည်ကိုလည်း မသဲကွဲ ကြောင်း ၎င်း ကပြောသည်။
ကိုဖီအာနန်၏ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး အသေးစိတ်အစီရင်ခံမှု ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ယနေ့ကြားနာမည်
ရခိုင်အရေး အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်များကြောင့် မလေးရှားရောက် မြန်မာ အလုပ်သမား ၃၀၀ ကျော် စိုးရိမ??
၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံ ပြင်သစ် အသင်းသားများ နှစ် ၂ဝ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တွေ့ဆုံ
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု များပြားခဲ့သောကြောင့် သီးနှံဧက ၃ဝဝဝ ကျော် ရေနစ်?
တိုက်ပွဲများကြောင့် ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကိုးခု၊ မြို့နယ် ၅၂ မြို့နယ်တွင် မြေမြှုပ်မိုင??
ထိုင်းနိုင်ငံမှ အချမ်းသာဆုံး သူဌေးကြီးနှင့် အခြားကုမ္ပဏီ ၁၂ ခုတို့က လေဆိပ်သုံးခုကို ချိတ်ဆ??